mitengo edu inozviisa kuchinja zvichienderana nerubatsiro uye zvimwe pamusika zvinhu. We kukutuma ane yoku- wekunge pashure boka rako, nesu uwane mamwe mashoko.
Small kuti unogamuchirwa, asi MOQ ndiyo hrs 4 chete.
Nokuti vakawanda kugadzira, kutungamirira nguva mazuva 20-30 mushure mekugamuchira muripo. Kutungamirira nguva vanobudirira kana (1) zvatakawana muripo wako, uye (2) tine chokupedzisira mvumo yenyu zvinhu zvenyu. Kana kwedu kutungamirira nguva haashandi wava yako, tapota endai pamusoro wako zvinodiwa ne Kutengeswa wako. Muzviitiko zvose tichaedza achengete zvaunoda. Kazhinji tinokwanisa kuita kudaro.
Unogona kuita mari yedu rokubhengi.
Isu garandi zvinhu zvedu uye hunoshamisa. kuzvipira kwedu kuna kwako kugutsikana pamwe zvinhu zvedu. In garandi kana kwete, ndicho tsika vekwedu kugadzirisa uye kugadzirisa zvose mutengi nyaya vose zvinogutsa. The vakawanda chezvawanyora hwose nokuda chigadzirwa unhu uye mwedzi 18 unhani.
Hongu, isu nguva dzose kushandisa yepamusoro ekisipoti kavha. Mazvikokota kavha uye non-mureza chiputiriso zvinodiwa vanogona kutongerwa chimwezve mutariri.
Kutumirwa mutengo zvinoenderana nenzira yaunosarudza kuti nhumbi. Express dzinowanzoona nzira inoita asiwo nzira dzakawanda zvinodhura. By gungwa mitoro ndiyo nzira yakanakisisa kuti mari huru. Chaizvoizvo mitoro rate tinogona chete kukupa kana tichiziva mashoko kuenda, uwandu, uremu uye nzira. Tapota kutirovera runhare uwane mamwe mashoko.